Iran: Firenen’Ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2017 18:47 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny Desambra 2008 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Noforonin'ireo mpianatra tao amin'ny Sekolin'ny Fianarana Horonan-tsarimihetsika Vancouver (VFS) ny lahatsary fohy eto ambany, “Iran: Firenen'ny bilaogera”. Namorona ity lahatsary ity ho ampahan'ny asan'izy ireo hanaovana ny programa Famoronana Nomerika VFS i Aaron Chiesa, Toru Kageyama, Hendy Sukarya ary i Lisa Temes.
Ao amin'ny bilaogin'ny Vancouver Film School, manoritsoritra ny dingana arahan'ny ekipa amin'ny sangan'asa ao anatin'ity lahatsoratra ity ny iray amin'ireo mpamolavola, Lisa Temes:
Our goal for this project as motion designers was to complement an informative and powerful script by using subtle yet engaging imagery. Although we took inspiration from sources such as the recent animated film Persepolis, we created all of our assets by photographing live subjects and tracing them in illustrator, so we were able to achieve the exact look we were aiming for.”
Ny tanjonay amin'ity tetikasa ity amin'ny maha mpamorona sary dia ny hameno ny rakitsoratra mampahafantatra sy matanjaka amin'ny alalan'ny fampiasana sary miserana saingy manintona. Na dia naka aingam-panahy avy amin'ny loharanom-baovao tahaka ny horonan-tsarimiaina vao haingana Persepolis aza izahay, nanangona izay singa nanananay rehetra izahay tamin'ny fakàna an-tsary ireo olona mivantana sy manamboatra izany amin'ny P.A.O, ka afaka nahatratra ny tena fijery tianay tratrarina.